ရွှေမြန်မာမှ ကြိုဆိုပါတယ်: 2015
အများအားဖြင့် ခုနောက်ပိုင်း ဖြစ်နေတာတွေက လုပ်ငန်းခွင်မှာ အငြင်းပွားစရာက ဘွဲ့ရတဲ့သူကို ခန့်မှာလား၊ လက်မှတ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူကို ခန့်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အတွေ့အကြုံ ရှိသူတွေကိုပဲ အလုပ်ခန့်မှာ လားဆိုတဲ့ ပြဿနာ တစ်ရပ်ပါပဲ။ အလုပ်ခေါ်တိုင်း ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်၊ ဒီပလိုမာ တတ်ရမည်။ ဘာဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့မှ မလိုက် ခေါ်တဲ့ ဟာတွေက အလုပ်ရှင်ထက်တောင် ဆရာကျတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ယခု လူအတော် များများက ပြောနေကြတယ်။ အလုပ်တွေ ဒီလောက် ခေါ်နေတာ ဘာလို့ အလုပ် လက်မဲ့တွေ ပေါနေတာလဲဆိုတဲ့ စကားတွေ ကြားနေရပါတယ်။ ကဲ ဟုတ်ပါပြီ။ လက်မှတ်တွေက နေရာတိုင်းမှာ တက်ရင် ခုတက် ခုရ ခေတ် ဖြစ်နေပြီ၊ ဒီတော့ လူတိုင်း အထင်မကြီးတော့တာကြောင့် ဘွဲ့ရ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထည့်ထားတယ် ဆိုရအောင်ကလည်း ခန့်မယ့် ကုမ္ပဏီက ဘွဲ့နဲ့ သက်ဆိုင်လား ကြည့်ပြန်တော့ ဒါလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ လက်မှတ် တွေက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ သူတိုင်း တက်လို့ ရတဲ့ အရာဆိုပေမယ့် ဘွဲ့ကတော့ ခုနည်းပညာ ခေတ်မှာ တစ်ခုလောက်တော့ ရထားသင့်တဲ့ အထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
Posted by manawphyulay at 12:37 AM No comments:
Labels: Job, စီးပွားရေး, အတွေးအမြင်
SECRETARY Vacancy Announcement
SECRETARY (1) Post
To monitor and conduct data based processing for school Registry, general administration and student’s statistic, preparation for new classes & final exam system.
Posted by manawphyulay at 12:31 AM No comments:
Labels: Job, စီးပွားရေး
ICT Teacher Vacancy Announcement
ICT Teacher (1) Post
· Bachelor Degree from University of Computer Studies or relevance knowledge
· Age 30 years and above are preferable.
· Having some experience in Administrative Work related education
- Able to teach basic ICT knowledge
- Able to teach operation system (Windows 8)
- Able to teach Microsoft Office 2010 (including Word, Excel, Power points, Access)
- Able to teach Internet & E-mail
Submit an application letter with CV or CVT Application, recent passport sized photo and Copy of relevance documents to the reception counter or by e-mail before 9th May 2015.
ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဘဏ်များ
Posted by manawphyulay at 10:14 PM No comments:
မြန်မာ့ ရှေးဟောင်း လက်ရာ ဓာတ်ပုံများ
Posted by manawphyulay at 9:34 PM No comments: